देउवाको पछिपछि लखरलखर हिड्ने माधवलाई कामरेड भन्न मिल्दैन : ओली – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारदेउवाको पछिपछि लखरलखर हिड्ने माधवलाई कामरेड भन्न मिल्दैन : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको कटु आलोचना गरेका छन् ।
बुटवलमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै ओलीले नेपाललाई ‘कामरेड’ भन्न नसकिने बताए । एमालेलाई फुटाएर नेपालले विरोधी पक्षको पछिपछि कुदेको ओलीको आरोप थियो ।
उनले भने, ‘मलाई साथीहरूले माधव कामरेड भन्नुस् भन्नुहुन्छ ? कसरी कामरेड भन्नु ? एमालेमाथि बन्चरो हान्नेलाई कामरेड भन्छन् ? एमाले चोइट्याउनेलाई कामरेड भन्छन् ? माधव नेपाल कामरेड होइन, एमालेविरोधी, अपराधकर्म गर्ने मान्छे हुन् । प्रतिक्रियावादीको सेवा गर्ने कठपुतलीवाला सरकार बनाउने अगुवा हुन् ।’
ओलीले अगाडि थपे, ‘शेरबहादुर देउवाको पछिपछि लखरलखर गर्ने मान्छेलाई कामरेड भन्न मिल्दैन । जो पार्टी ध्वस्त गर्न लागेको छ, त्यो कामरेड हुँदैन ।’ नेपालले एमाले नेतृत्वको सरकार छँदा सँधै असहयोग गरेको ओलीले गुनासो गरे ।
‘हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्दा माधव नेपालले कहिल्यै सरकारको समर्थन गरेको सुन्नुभयो ? सरकारको प्रशंसामा एक शब्द बोलेको सुन्नुभयो ? यस्तो कुन्ठाग्रस्त मान्छेलाई तपाईंहरू कसरी कामरेड भन्नुहुन्छ ?’, ओलीले भने ।